DOWNLOAD KLAX - Photoreal Airport nke Los Angeles FSX & P3D - Rikoooo
KLAX - Photoreal Airport nke Los Angeles FSX & P3D
downloads 46 140
Ihe ngosi a nke Real Photo bụ mmezigharị zuru oke maka FSX/P3D Ebe nnabata KLAX nke ndabara site na iji ụdị ADE (v01.50) kachasị ọhụrụ, Google SkecthUp 8, & SBuilderX tool tool.
Ọhụrụ a KLAX mma, Version 3.0 agụnye ọhụrụ ọnụ ụlọ na e resized na redesigned anya ọzọ kwesịrị. M kwukwara ọnụ ọkụ, (ọ n'abalị ìhè oriọna ma), ọhụrụ osisi, ụgbọala na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala,
ala ugbo ala taxiway ojiji ofu, na ọtụtụ ndị ọzọ mara mma nkọwa aka na KLAX ahụmahụ.
Ndị ọzọ nkọwa gụnyere ndị na-New Tom Bradley International enweghị Ngwọta, ụlọ dị na W.Cenury Blvd, 9 Airbus A380 adọba ụgbọala tụrụ, na Photo Real ala textures. The runways na ọdụ Uwe Mkpuchi Akwa na-kwekọọ iji kwekọọ Google & Yahoo satellite imagery.
Mbido ahụ mara mma ma kwupụta onwe ya FSX/P3D. Goga maka ọdụ ụgbọ elu KLAX ị ga-ederịrị ihe Klax na ubi "Airport koodu" gị ụgbọ elu manager